China Edge Protection Seal Strips orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Tianzheng
Ny plastika Edge Trim dia azo ampiasaina amin'ny toerana rehetra misy ilana haingon-trano na fiarovana. Ny fantsom-bozaka vita amin'ny plastika dia manolotra fanalefahana, fisisihana ary mahatohitra ny zavatra simika sy ny toetr'andro. Ny sisin'ny plastika dia mahazaka ny hafanana tafahoatra ihany koa. Ny sisin'ny plastika matetika dia miaraka amina vy fototra, izay ampiasaina amin'ny sisiny na ambonin-javatra rehetra mba ho malama ao anatin'izany ny varavarana RV, sarety golf, taxi-brousse, traktera, moto, fantsona ATV, fiberglass, vy metaly ary maro hafa.
Afaka manolotra vahaolana isan-karazany izahay hiarovana ny sisinao amin'ny fiatraikany sy ny fahasimbana. Ny fisafidianana be dia be ny mombamomba ny fingotra fiarovana dia azo ampiasaina amin'ny ravina lamba, takelaka ary hatevin'ny sisiny. Izahay dia mamokatra ny mombamomba anay amin'ny fiarovana amin'ny sisin-tany samihafa mba hifanaraka amin'ny fampiharana sy ny tontolo iainana miasa anao. Azonay atao ihany koa ny mamokatra mombamomba ny bespoke amin'ny famaritana marina anao, miankina amin'ny habetsahan'ny lamina farany ambany.
Ny piraofilina fiarovana amin'ny sisin-tany dia natao manokana handraisana ireo fiantraikany mba hiarovana ny sisinao amin'ny fahasimbana. Izy ireo koa dia miaro ny mpampiasa amin'ny ratra mety hitranga noho ny sisiny manify sy maranitra. Izahay dia manamboatra ny mombamomba anay hatrany amin'ireo fitambaran-kalitao avo lenta izay misy. Izany dia miantoka fa ireo mpiaro ny sisintsika dia tsy vitan'ny ampiasaina, fa natao haharitra koa. Na eo aza ny fanolorana tanjaka avo lenta sy ny fanoherana ny ranomaso, ny mpiaro antsika dia somary malefaka ihany koa. Izany dia ahafahan'ny mombamomba anay mivezivezy manodidina ny karazany miolakolaka.
Azonao atao ny mametraka ny maro amin'ireo mpiambina anay nefa tsy mampiasa dity. Io dia tsy ahafahanao mampiditra sy manaisotra ireo mombamomba anao raha ilaina izany. Izy io koa dia ahafahanao mampiasa halava tokana im-betsaka.
Fampiharana: Fiarovana amin'ny sisiny tsy voadio, haingon-trano
Vokatra: Soraty ny sisin'ny tenanao
Hamafisana (Shore A): 67 - 82 °
Fitaovana: PVC, Steel
Loko: Mainty, mena, fotsy, volondavenona, manga
Ampiasao ny tanana iray, ahodino haingana eo amin'ny sisiny ary miaraka amin'izay dia tsindrio ny ankihiben'ilay tànana iray hafa amin'ny fotoana ihaonan'ilay t / haingana ny sisiny. Azo tapahina mora foana izy io ary azo mitred boribory zoro tery amin'ny alàlan'ny fanapahana ny faritra V misy snips tin. Ny tendrony dia azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny fanafanana ny tendrony manohina amin'ny vy metaly mafana.
Teo aloha: Tady tombo-kase fanamboarana
Manaraka: Tombo-kofehy mifamatotra
Tombo-kase Fiarovana amin'ny sisiny